Hatraiza ny maha-azo antoka ny dia iraisam-pirenena ho an'ny US Citizens?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hatraiza ny maha-azo antoka ny dia iraisam-pirenena ho an'ny US Citizens?
Vao mainka nampidi-doza kokoa ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020. Ny Famonoana amerikana amerikana iray ny ofisialy anio any Baghdad dia midika hoe saina mena ho an'ny fizahan-tany manerantany, ary indrindra any Iran, ny faritra Golfa ary Israel. Ny ady iray eo amin'i Iran sy Etazonia dia hanova tanteraka ny karatra fitsangatsanganana, fizahan-tany, fitaterana ary dia tsara.
Vao tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nilaza i Iran eTurboNews hisolo ny vola miditra amin'ny solika ny fizahantany. Raha ny filazan'ny filoha lefitra Iraniana Ali Asghar Mounesanwha dia raisina an-tanan-droa ny Amerikana sy ny eropeana. Izany dia niako tao amin'ny hafatra Facebook maro, famoahana gazety ary fanentanana mailaka nataon'ny mpandraharaha mpizahatany Iraniana mitady orinasa amerikana sy eropeana.
Miaraka amin'ny famonoana ny jeneraly Soleimani's, hita ho iray amin'ireo manan-kery indrindra any Iran, dia mety efa tany anaty ady i Etazonia sy i Iran. Ny hetsika androany dia tena namono ny fifandraisan'ny dia sy ny fizahan-tany teo amin'i Etazonia sy Iran. Ireo mpizahatany amerikana tavela any Iran dia mety te-handinika ny fiaingana eo noho eo. “Aza mandeha any Iran noho ny mety hisian'ny fakana an-keriny, fisamborana, fitazonana olona amerikana.” Ity ny fampitandremana ao amin'ny tranokalan'ny Departemantam-panjakana amerikana ho an'izay mieritreritra ny ho any Iran.
Ny zoma, ny filohan'i Iran, Hassan Rouhani dia nanameloka mafy ny fanafihana amerikana ary nilaza fa ny famonoana azy dia hahatonga an'i Iran sy ireo firenena afaka hafa hanana finiavana kokoa hanohitra an'i Etazonia. Ny mpitarika ny revolisiona Islamika Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dia nilaza androany fa ireo izay namono ny komandy IRGC Quds Force ny jeneraly Qassem Soleimani dia tsy maintsy miandry valifaty henjana.
Hatramin'izao dia mailo hatrany ny toerana amerikana na aiza na aiza manerantany. Ny torolàlana momba ny dia ankapobeny ataon'ny Departemantam-panjakana amerikana dia tokony ho eo amin'ny fantsona eo noho eo. Nanome toky ny olom-pirenena amerikana ny pentagon fa hiaro ny tombontsoany na aiza na aiza eran'izao tontolo izao.
Ny mpizahatany no tanjona mora indrindra raha ny resaka fampihorohoroana. Tsy lasa toerana azo antoka ho an'ny mpandeha amerikana izao tontolo izao. Mazava ho azy fa tsy lasa toerana azo antoka ho an'ny fiarahamonina fizahan-tany izao tontolo izao. Miandry ny fahitana ny fihetsiky ny fikambanana lehibe UNWTO, WTTC, ETOA, USTOA manoloana ny toe-javatra vaovao atrehin'izao tontolo izao.
Tao anatin'izay roa taona lasa izay, Iran dia nametraka ny drafitra B tamin'ny fanovana ny fanamafisana ny fifandraisana akaiky amin'ny UNWTO, ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Mba hitazomana ny orinasan'ny fizahan-tany velona sy hampivoarana azy dia mitodika amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ny firenena. Tehran dia nanambara tetikasa hanamafisana ireo fotodrafitrasa sy hanamorana ny kasety mena amin'ny ezaka hisarihana mpitsidika bebe kokoa avy amin'ny firenena ao amin'ny faritra.
Iran dia nanampy an'i Egypt, Azerbaijan, Syria, Turkey, Lebanon, ary Georgia ho ao amin'ny lisitr'ireo firenena izay manana teratany afaka mahazo visa rehefa tonga. Mikasa ny hamelomana indray ireo lalan-dranomasina mpandeha ny drafitra, ao anatin'izany ny làlana manasaraka an'i Iran sy Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, ary Oman.
Ny drafitra momba ny lalamby izay manomboka amin'ny faritra atsimo andrefan'ny faritanin'i Khuzestan ao Iran, mamaky an'i Iràka ary mifarana amin'ny tanànan'ny seranana any Latakia dia ao anatin'ny drafitra. Iran, Iraq, ary Syria dia nanaiky ny hiara-hiasa amin'ny fampandrosoana ny rafitra hampitombo ny fizahantany ara-pinoana. Iran dia mora vidy amin'ny toerana fitsangatsanganana aorian'ny fihenan'ny sandam-bolany, ny rial, taorian'ny sazy.
Ny fitsangatsanganana any Iran dia nitombo hatrany amin'ny 5.2 tapitrisa tamin'ny 2015, izany hoe 4 tapitrisa tamin'ny taona lasa. Nahatratra 5,308 2016 ny isan'ireo mpizahatany amerikana tamin'ny 62, XNUMX% izany tamin'ny roa taona talohan'izay, hoy ny World Tourism Organization.
Mety hisy ve ny fanovana fitondrana any Iran? Ny sasany mahita fa ity dia mety ho fotoana iray hijoroan'ny tanora ao Iran handany fotoana hikomiana.
Eo am-piomanana tanteraka ny teoria fikomiana ao amin'ny twitter. Ny famoahana farany dia mamintina: Iran Azo inoana fa nuke ampahany amin'ny Arabia Saodita ary avy eo Arab Saudi, Israel ary Torkia dia nuke Iran. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany dia tsy manomboka tsara amin'ny taona 2020 hatreto.
Androany no manome ny dikany Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany zava-dehibe hafa. Roa ambin'ny folo taona lasa izay Mpanorina IIPT Louis D'Amore sy Juergen Steinmetz, mpanonta ny eTurboNewAfaka niresaka tamin'ny mpitondra iraniana tao amin'ny lapan'ny Silamo an'ny vahoaka momba ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany. Androany ny ivon-toerana maneran-tany momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy dia tokony hijoro amin'ny fijerena ity fivoarana farany ity.
Ny filohan'ny Safertourism Dr. Peter Tarlow dia nilaza: Mijoro eo an-toerana ny ekipanay Rapid Tourism Response.